यो केवल चयन गर्न कठिन छ5सजिलो दिन तपाईं साझेदारी गर्नुहोस् मिलान रेल देखि यात्रा. इटालीको फेसन राजधानी भिजिट टुरिस्टको विकल्पहरूको साथ सजिलैसँग छ. मात्र यो फैशन भरिएको छ, तर यो एक अविश्वसनीय इतिहास छ, वास्तुकला, र रमणीय दृश्य बारेमा घर लेख्न.
यात्रा नै लायक यो छ: यो दुनिया मा steepest रेल यात्रा हो, बाट उक्लनुभन्दा 429 माथि माथि मीटर 1800 स्विस पहाडहरूमा. रेल विन्डोबाट देखिएको आश्चर्यजनक अल्पाइन दृश्यहरू मतलब तपाईं रेल छोड्न चाहानुहुन्न.
तपाईं सेन्ट को स्विस शहर मा समाप्त हुनेछ. Moritz, स्विट्जरल्याण्ड सबैभन्दा प्रसिद्ध पहाड रिसोर्ट्स एक. यो जहाँ धनी र प्रसिद्ध छ आफ्नो बिदा खर्च वा एक च्यालेट को मालिक.
सेन्ट. Moritz को क्यान्टन दक्षिण अन्वेषण गर्न सिद्ध आधार बनाउँछ Graubunden. यो स्विट्जरल्याण्ड को अन्य भागहरु गर्न दिन यात्राको लागि राम्रो आधार छैन, रूपमा धेरै लिन थियो घुम्ने समय. यो छ, तथापि, हाम्रो शीर्ष को एक5मिलान रेल हुनत देखि दिन यात्राहरू! शहर मा नाइटलाइफ अलग्गै, यहाँ मुख्य गतिविधिहरु बाहिर छन्. तपाईं पैदल यात्रा चाहनुहुन्छ भने, साइकल, वा जाडो खेल, तपाईं यो आश्चर्यजनक क्षेत्रमा सप्ताह आफैलाई आनन्द उठाउन सक्छौं.
शहर को शीर्ष गर्न तल देखि रज्जुमार्ग सवारी, र बर्गामो गरेको महत्वपूर्ण स्मारक मा एक नजर, को सेन्ट जस्ता. मारिया Maggiore गिरजाघर र Colleoni मण्डप.
पछिल्लो, तर कम से कम, बर्गामोको अविश्वसनीय वरपरको प्रशंसा गर्न केहि समय लिन नबिर्सनुहोस्, पहाड माइल लागि stretching संग, टाढा लेक नाइस गर्न सबै बाटो तल.
को Franciacorta क्षेत्र केही शानदार प्रदान गर्दछ, तपाइँ नमूनाको लागि पुरस्कार-विजयी वाइन, भव्य इटालियन दृश्यहरु बीच मा.
को Franciacorta DOCG क्षेत्र बारे comprised छ 3,000 इटली लोम्बर्डी क्षेत्रको आइसियो तालको दक्षिणी भागमा दक्षिणमा केही आश्चर्यजनक दृश्यहरू ओगट्ने फसलहरू. यो धेरै अन्य प्रसिद्ध इटालियन को थूकना दूरी भित्र छ रक्सी क्षेत्रहरु, पिडमन्ट पश्चिम र Conegliano Valdobbiadene जस्तै (सुपर प्रिमियम Prosecco को घर) पूर्वमा.
यो प्रधानमन्त्री स्थान Franciacorta रोमान्टिक Getaway वा राम्रो योग्य रक्सी यात्राको लागि एउटा सिद्ध गन्तव्य बनाउँछ, बस एक घण्टा मिलान देखि यात्रा, यो समान मापनमा सुलभ र सुन्दर छ.
यसको सुन्दर घूमाउनुहोस्, cobbled सडकमा. प्रसिद्ध Piazza सान मार्को मा एक कफी. सायद विशेष अनुभवको लागि नहरहरू मार्फत गन्डोला सवारी गर्न तन्काइन्छ पनि.
Do you want to embed हाम्रो ब्लग पोस्ट “5 सजिलो दिन मिलान रेल देखि यात्रा” आफ्नो साइट मा? तपाईं या त लिन हाम्रो फोटो र पाठ र हामीलाई क्रेडिट लिंक संग यो ब्लग पोस्ट. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/e એમ્બેડ/https://www.saveatrain.com/blog/day-trips-milan-train/?lang=ne اور- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
बर्गामो comolake डेट्रिप्स यूरोपबीट्रेन मिलान रेल यात्रा ट्रेन यात्रा सल्लाह यात्रा